Vechidiki veZanu PF Vanovharisa Musangano weKanzuru yeMutare
Zvita 17, 2010
Vechidiki veZanu PF vanonzi vavharisa musangano wemakanzura eguta reMutare, vachiti kuitia musangano uyu kuzvidza mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, avo vari muguta iri nemusangano webato ravo reZanu PF.
Vechidiki ava vanonzi vatuka nekunyomba meya weguta reMutare, VaBrian James, avo vanga vachitaura panguva yapinda vechidiki ava muhofisi yanga ichiitirwa musangano uyu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kudivi reZanu PF panyaya iyi.
Kanzuru yeMutare yakazara nemakanzura ebato reMDC inotungamirirwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, asi mune mamwe makanzura eZanu PF akazodomwa
Negurukota rezvematunhu, VaIgnatius Chombo.
Mukokeri wemakanzura mukanzuru yeMutare uye vari kanzura weWard 17 vachimirira MDC-T, VaNoel Nezomba, vaudza Studio 7 kuti sekanzuru havana kufara nezvaitwa nevechidiki ava, uye vachakwidza nyaya iyi kuhutungamiri hwebato ravo.
Hurukuro naVaNoel Nezomba